Sida lagu xusay buugii asalka ahaa iyo kuwi dambee laga tixraacayba waxaa la yiri: Waxaa jiri jiray Boqor la oran jiray Shariyaar .. Boqorkii Shahriyaar baa afadiisii uu aadka u jeclaa gogol-dhaaf samaysay, kadibna boqorkii si daran buu u carooday, wuxuuna go’aan ku gaaray in uu dumarka ka aarsado. Wuxuu amar ku bixiyay in hameyn walba loo aroosiyo gabar da' yar oo bikra ah, waagu markuu baryana la dilo.
Waxaa arrinkaas u xilsaarnaa Wasiirkiisii Kowaad. Wax hadba gabar yar loo aroosiyoo waabarigiina la dilaaba, maalinti dambe ayuu wasiirkii waayay gabar uu u aroosiyo Shahriyaar. Asagoo murugaysan baa waxaa aragtay gabar inan ah oo uu asagu dhalay, waxayna weydiisay sababta uu la murugaysan yahay, markuu u sheegay arrinkii bay ku tiri; aabbe anaa guursanaaya boqorkee ha tiiraanyoon. Wasiirkii aad buu uga naxay soojeedintii gabadhiisa, wuxuuna isku dayay inuu ka hor istaago, wayse ku adkaysatay go’aankeedii.
Gabadhaas oo la oran jiray Shahrisaad waxaa loo aroosiyay boqorkii Shahriyaar. Hameynkii markii loo hooyay boqorkii, waxay bilawday inay u sheegto sheekooyin xiiso badan. Markii sheeka walba marayso gabogabo oo ay ugu xiisa badan tahay bay joojisaa. Boqorkii oo aad ula dhacay sheekooyinkii Shahrisaad wuxuu amraa inaan la dilin Shahrisaad ilaa laga gaaraayo maalinta xigta.
Gabadhii habeyn walba waxay bilawdaa sheeko cusub oo kuwii ka horreeyay ka sii xiiso badan, waxayna gunaanadka sheekada la sugtaa habeenka xiga, waxayna sidaas ku wadday kun iyo kow habeeyn (1001 habeeyn). Markii dambe, waxay noqotay, in boqorkii Shariyaar uu go’aansado inaan la dilin, sidaasna waxaa ku joogsaday arooskii gabdhihii la dilaayay habeenkii la arooso waabarigiisa.
Sheekooyinkii ay Shahrisaad ku maaweelin jirtay boqorkii Shahriyaar ee socday kunka iyo kowda hameyn waxaa ka mid ahaa:
Sheekadii dibiga iyo dameerka
Sheekadii jinniga iyo ganacsadaha
Sheekadii Jinniga iyo kalluumaystaha
Sheekadii xamaalka iyo seddexdii dumarka ahaa ee reer Baqdaad
Waxaa kaloo jiray sheekooyin waayihii dambe lala xiriiriyay Alfi Layla Wa Laylaha oo iyaguna caan noqday waxaana kamid ahaa:
1- Sheekadii Calaa’u-Diin iyo nalkii yaabka badnaa
2- Sheekadii Cali-Baaba iyo afartankii tuug
3- Sheekadii Sindibaad iyo todobadiisii safar-badeed
Hits : 7239